‘दिलको भित्ता’मा फोटो टास्दै कार्टुन क्रु (भिडियाे)
पछिल्लो समयको चर्चित नृत्य समूह ‘द कार्टुन क्रु’को नयाँ भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘दिलको भित्तै’मा बोलको उक्त गीत शुक्रवार युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो । गीनमा एन्जिला रेग्मी, नवीन रावल, अल्मोडा राना उप्रेतीको स्वर रहेको छ ।
‘भाइरल भैदियो’ भन्दै यसरी नाचे सबिन र साथमा आठ बर्षिया दीक्षा
गायक, गीतकार तथा सङ्गीतकार मानस राजको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ’भाईरल भैदियो’ बोलको गीत बिहीबार युट्युव मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । स्वर, शब्द तथा सङ्गीत मानस राजको रहेको यस गीतको भिडियोलाई सबिन कार्की ’बिस्ट’ले तयार पारेका छन् ।
सि.एल. शर्माको स्वर एलिसा राई र पुष्प खड्का अभिनित “एकै नजरले” सार्वजनिक (भिडियो)
गायक तथा सङ्गीतकार सि.एल. शर्माको “एकै नजरले” बोलको गीति म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ ।